Beesha caalamka oo qodobbo culus hor-dhigtay M/weynaha Jubbaland iyo Axmed Madoobe oo ka horyimid,Sawiro | HalQaran.com
Beesha caalamka oo qodobbo culus hor-dhigtay M/weynaha Jubbaland iyo Axmed Madoobe oo ka horyimid,Sawiro
Kismaayo (Halqaran.com) – Madaxweynaha maamulka Jubbaland, Mudane Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa Xarunta Madaxtooyada ku qaabilay wafdi ka socday Beesha Caalamka oo uu hogaaminayay Wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya James Swan.
Wafdigaan waxaa kaloo ka mid ahaa xubno kasocday IGAD, Safiirka Midowga Afrika ee Soomaaliya, Taliyaha guud ee Amisom iyo xubno kale.
Kulankan ayaa maamulka Jubbaland waxaa Madaxweynaha ku wehelinayay Madaxweyne ku-xigeenada iyo Wasiirada Arimaha gudaha iyo Amniga.
Waxaa looga hadlay Kulankan hanaanka ay u socoto doorashada Jubbaland iyo sidii ay u noqon laheyd doorasho xor iyo xalaal ah, lagana fogaado waxkasta oo keenaya fawdo iyo amni darro.
Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Madoobe ayaa xubnahan kasocday Beesha Caalamka u sheegay inuusan asagu sharciyad u laheyn wax ka badalka jadwalka doorashada gudiga xuduudaha iyo doorashooyinkana ay howshaa tahay shaqadooda.
Gabagabadii kulanka ayaa waxaa la isku raacay in gudiga Xuduudaha iyo Doorashooyinka Jubbaland laga sugo jawaabta kama danbaysa ah ee la xiriirta hanaanka doorashooyinka Jubbaland.
Beesha caalamka oo qodobbo culus hor-dhigtay